Uhlobo lwePhepha eliMhlophe | Zonke iReaders
Uhlobo lwePhepha eliMhlophe
Amazon Alithandabuzeki elokuba ngomnye wabenzi abakhulu beencwadi ze-elektroniki, ezikwaziyo ukuthengisa amakhulu amawaka eeyunithi kumaxesha akutshanje kwaye ikwazile ukuguqula imarike ngokusungulwa kwesixhobo esifuna ukusibonisa namhlanje; i Uhlobo lweWebhuwwhite. Uyilo lwayo oluhle, ubungakanani bayo obuncinci kwaye ngakumbi ukukhanya kwayo okuhlangeneyo kuyenza ibe yenye yeeReaders ezilungileyo kwimarike.
Nangona ayisenguye umzalwana omkhulu wentsapho ye-e-book yaseAmazon ngokufika kohambo lohlobo, ihlala ikwindawo enelungelo kwaye isisixhobo esinomdla ngaphakathi nangaphandle. Ukongeza, ixabiso layo elehlisiweyo sesinye isizathu esihle sokuyithenga ngaphandle kokucinga kakhulu.
Njengesiqhelo siya kuzama ukuhlalutya ngokweenkcukacha le Kindle Paperwhite ngaphakathi nangaphandle.
3 Ngaba ikhona enye into endifuna ukuyazi?
Yenziwe ngeplastikhi kwaye igqityiwe ngombala omnyama we-matte, le Paperwhite inika inkangeleko entle yokuba zimbalwa kakhulu iiReaders kwimarike ezilawulayo. Ngobungakanani obuncinci (i-16,9 x 11,7 x 0,91 iisentimitha) esivumela ukuba siyithwale phantse nayiphi na ipokotho okanye ibhegi. Ubunzima bayo beigram ezingama-206 ayinangxaki nayo, umzekelo, ukufunda ebhedini okanye ukuyiphatha kugcinwe epokothweni yebhatyi okanye ibhatyi.
La Iscreen sokuchukumisa i-intshi ezi-6 kunye nonobumba we-e-papper technology yenye yamandla alo hlobo.
Ngaphakathi siza kudibana iprosesa ekhawulezayo ngama-25% kunaleyo sinokuyifumana kwiimodeli zangaphambili kwaye ungabona ngokukhawuleza xa uqala ukufunda kwaye ujonge, umzekelo, ukuba sikhawuleza kangakanani ukutyhila amaphepha.
Olu hlobo lwePhepha elinePhepha eligciniweyo ligcina ngaphakathi i-2 okanye i-4 GB ngokuxhomekeke kwinguqulelo ethengiswayo kwilizwe lakho kwaye eya kusivumela ukuba sigcine phakathi kwe-900 kunye ne-1.100 yee-eBooks kwinguqulelo yokuqala, naphakathi kwe-2.00 kunye ne-2200 eBooks kwinguqulelo yesibini. Kuxhomekeke kwizitokhwe ezikhoyo kwilizwe ngalinye, i-2 GB okanye i-4 GB inguqulelo iya kubakho, kwaye mhlawumbi ngethamsanqa unokukhetha phakathi kwezi zimbini.
Ibhetri yayo, nangona singazi i-mAh equlathe yona, siyazi enkosi kwiAmazon, efanayo inikezela ngedatha malunga nebhetri yayo, eya kusivumela ukuba sifunde iiveki ngaphandle kokuhlawulisa isixhobo. Eli xesha linokwahluka kakhulu kuxhomekeke ekusetyenzisweni kwesibane esidityanisiweyo nesitya izixa ezikhulu zebhetri ukuba usetyenziso luqhubeka kakhulu, ke ngoko kuyathakazelisa ukuba ukuba asidingi kukhanyiswa ukuze sifunde siyicime kwaye kuphela yisebenzise kuye ngamaxesha apho ibaluleke kakhulu.
Ngaba ikhona enye into endifuna ukuyazi?
Phambi kokuba umisele ukuthenga i-Kindle Paperwhite kufuneka uyazi loo nto Le eReader ikwabandakanya umsebenzi onomdla obizwa ngokuba yi-Kindle Page Flip kwaye oko kuyakusivumela ukuba sikhangele ezincwadini ngephepha, sitsibe ukusuka kwisahluko esinye siye kwesinye okanye sitsiba ukuya esiphelweni sencwadi ukuze sazi isiphumo ngaphandle kokuphulukana nendawo esikuyo.
Kuyimfuneko ukuba uyazi ukuba kwincwadi nganye oyifundayo uya kuba nakho ukudibana nentsingiselo yalo naliphi na igama kwiDikshinari yolwimi lwaseSpain okanye iWikipedia.
Ukongeza kwaye njengazo zonke izixhobo zohlobo unokukrwelela amabinzana kwaye wabelane ngazo nabahlobo bakho, ukongeza amanqaku encwadi okanye ukongeza amanqaku nangaliphi na ixesha.
Okokugqibela kuya kufuneka uyazi loo nto Zonke izixhobo ezithengiswa yiAmazon zijolise ikakhulu kuwe xa usebenzisa umxholo wedijithali, kule meko iincwadi kwifomathi yedijithali, ukuze kwiscreen sasekhaya ngokuqinisekileyo ufumane ukhetho lweencwadi oza kuzithenga. Ukuba awuyithandi le nto kwaye awufuni nabani na ukuba acebise nantoni na kuwe, okanye ukuqhubeka nokubona iincwadi ezithengiswayo okanye ezokuthenga, kungcono ukuba uncike ekuthengeni enye i-eReader. Kwimeko apho ukule meko, sinokukuxelela ukuba nangaluphi na ixesha olu hlobo lokucebisa luyinkathazo okanye luphazamisa ukufundwa kwencwadi.
Ukuba ufuna thenga i-Paperwhite yohlobo, ungayenza ngoku kule khonkco
Ubukhali kunye nomgangatho wesikrini
Uyilo lwayo oluhle kwaye luyingqondi
Amandla amakhulu anikezela ngesantya esiphezulu kakhulu. Iqapheleka ngakumbi xa kulayishwa iincwadi kwaye kutyhilwa iphepha.
Uyilo luhlukile kwaye alunangqondo, mhlawumbi lukhulu kakhulu kubasebenzisi abaninzi
Ixabiso layo linokuphakama ngandlela ithile kwiipokotho ezithile
Unxibelelwano olungunaphakade ekufuneka sinalo neAmazon
Umendo opheleleyo kwinqaku: Zonke iiReaders » iinkampani » Amazon Kindle » Uhlobo lwePhepha eliMhlophe
Uhlalutyo lwePapyre 630 ngokweenkcukacha ezinkulu
Umbono weTolino, i-eReader entsha yeTolino Alliance